16 Ana m akọwara unu nwanna anyị nwaanyị bụ́ Fibi, bụ́ onye na-eje ozi+ n’ọgbakọ dị na Senkrea,+ 2 ka unu wee nabata+ ya n’ime Onyenwe anyị dị ka e kwesịrị ịnabata ndị nsọ, ka unu wee nyekwara ya aka n’ihe ọ bụla enyemaka unu pụrụ ịdị ya mkpa,+ n’ihi na ya onwe ya bụ onye na-agbachitere ọtụtụ ndị, ee, onye na-agbachitere mụ onwe m. 3 Keleerenụ m Priska na Akwịla+ bụ́ ndị ọrụ ibe m+ n’ime Kraịst Jizọs, 4 ndị tinyere ndụ ha n’ihe ize ndụ+ n’ihi mkpụrụ obi m. Ọ bụghị naanị m na-ekele ha, kama ọgbakọ niile nke ndị mba ọzọ na-ekelekwa ha;+ 5 keleekwanụ ọgbakọ nke dị n’ụlọ ha.+ Keleenụ onye m hụrụ n’anya bụ́ Epinetọs, onye so ná ndị mbụ+ ghọrọ ndị na-eso ụzọ Kraịst n’Eshia. 6 Keleenụ Meri, bụ́ onye rụụrụ unu ọrụ dị ukwuu. 7 Keleenụ Andrọnaịkọs na Junias, bụ́ ndị ikwu m+ na ndị mkpọrọ ibe m,+ bụ́ ndị a ma ama n’etiti ndịozi, ndị bụwokwara ndị na-eso ụzọ Kraịst+ ruo ogologo oge karịa mụ onwe m. 8 Keleerenụ m+ Amplietọs onye m hụrụ n’anya n’ime Onyenwe anyị. 9 Keleenụ Ọbenọs, onye ọrụ ibe anyị n’ime Kraịst, na Stekis, onye m hụrụ n’anya. 10 Keleenụ+ Apelis, onye omume ya dị mma n’ime Kraịst. Keleenụ ndị si n’ezinụlọ Arịstọbulọs. 11 Keleenụ Herodiọn onye ikwu m.+ Keleenụ ndị si n’ezinụlọ Nasisọs, bụ́ ndị nọ n’ime Onyenwe anyị.+ 12 Keleenụ Traịfina na Traịfosa, bụ́ ụmụ nwaanyị na-arụsi ọrụ ike n’ime Onyenwe anyị. Keleenụ Pesis, onye anyị hụrụ n’anya, n’ihi na nwaanyị a rụrụ ọtụtụ ọrụ n’ime Onyenwe anyị. 13 Keleenụ Rufọs, onye a họọrọ n’ime Onyenwe anyị, na nne ya, onye bụkwa nne m. 14 Keleenụ Asịnkritọs, Fligọn, Hemis, Patrọbas, Hemas, na ụmụnna ndị ha na ha nọ. 15 Keleenụ Filọlọgọs na Julia, Niriọs na nwanne ya nwaanyị, na Olimpas, na ndị nsọ niile ha na ha nọ.+ 16 Jirinụ nsusu ọnụ dị nsọ kelee ibe unu.+ Ọgbakọ niile nke Kraịst na-ekele unu. 17 Ma ana m agba unu ume, ụmụnna m, ka unu leruo ndị na-akpata nkewa+ anya, tinyere ndị na-akpata ihe ịsụ ngọngọ, nke bụ́ ihe megidere ozizi unu mụtara,+ na-ezenụ ha eze.+ 18 N’ihi na ụdị ndị dị otú ahụ abụghị ndị ohu nke Onyenwe anyị Kraịst, kama ha bụ ndị ohu nke afọ ha;+ sitekwa n’okwu ire ụtọ+ na okwu ịja mma,+ ha na-arafu obi nke ndị na-adịghị aghụghọ. 19 N’ihi na mmadụ niile amarawo banyere nrubeisi unu.+ Ya mere, ana m aṅụrị ọṅụ n’ihi unu. Ma achọrọ m ka unu bụrụ ndị maara ihe+ n’ihe banyere ezi ihe, ka unu bụrụkwa ndị aka ha dị ọcha+ n’ihe banyere ihe ọjọọ.+ 20 Chineke nke na-enye udo+ ga-azọpịa Setan+ n’okpuru ụkwụ unu n’oge na-adịghị anya. Ka obiọma Onyenwe anyị Jizọs nke na-erughịrị mmadụ dịnyere unu.+ 21 Timoti onye ọrụ ibe m na-ekele unu. Lushiọs na Jesin na Sosipata, bụ́ ndị ikwu m, na-ekelekwa unu.+ 22 Mụ onwe m, bụ́ Teshiọs, onye dere ihe dị n’akwụkwọ ozi a, na-ekele unu n’ime Onyenwe anyị. 23 Geyọs,+ onye mụ na ọgbakọ ahụ dum nọ na nke ya, na-ekele unu. Erastọs onye nlekọta obodo+ na-ekele unu, Kwọtọs nwanne ya na-ekelekwa unu. 24 * —— 25 Onye ahụ+ nke pụrụ ime ka unu guzosie ike dị ka ozi ọma m na-ezisa si dị, dịkwa ka nkwusa m na-ekwusa banyere Jizọs Kraịst si dị, dị ka mkpughe e kpughere ihe nzuzo ahụ dị nsọ+ si dị, nke e zoro ezo kemgbe, 26 nke e mere ka ọ pụta ìhè+ ugbu a, nke e mekwara ka a mara n’etiti ndị mba ọzọ niile site n’amụma ndị dị n’Akwụkwọ Nsọ, dị ka ihe Chineke nke mgbe ebighị ebi nyere n’iwu si dị, iji kwalite nrubeisi site n’okwukwe;+ 27 ya bụ, Chineke, onye naanị ya maara ihe,+ ka otuto+ dịịrị ya ruo mgbe ebighị ebi site n’aka Jizọs Kraịst.+ Amen.
^ Ihe odide Grik ndị kasị mee ochie edenyeghị okwu ndị a: “Ka obiọma na-erughịrị mmadụ nke Onyenwe anyị Jizọs dịnyere unu niile. Amen,” bụ́ nke kwekọrọ n’ihe e dere ná ngwụcha amaokwu nke iri abụọ.